अस्पतालको शैय्याबाट बर्षमानको छटपटी, बन्द सत्र विथोलिने संकेत ! - jagritikhabar.com
अस्पतालको शैय्याबाट बर्षमानको छटपटी, बन्द सत्र विथोलिने संकेत !
नेकपा माओवादी केन्द्रको हिजोबाट सुरु भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शीर्ष नेताहरुले आफूलाई विभिन्न पदका लागि दाबी गरिरहेका छन्। तीन दशक देखि निरन्तर माओवादीको,
नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै दोहोरिने लगभग निश्चित बनेको हो। तर अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद महासचिवमा कस्ले बाजी मार्छ ? त्यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।
महासचिव पदका प्रवल दावेदार वर्षमान पुन उपचारकालागि चीनमा रहेका छन्। अस्पतालको शैय्याबाटै पुनले यस्तो दाबी गरेपछि माओवादीमा खैलाबैला मच्चिएको छ। अब प्रचण्डले कसलाई महासचिव बनाउछन्त्यो, भने हेर्न बाँकी छ।
उपचारकालागि केही महिनादेखि चीनमा रहेका पुन त्यहाँ सम्भव नभएपछि अहिले चीनमा रहेका छन्। स्रोतका अनुसार पुन यो महाधिवेशनमा अनुपस्थिति भएपनि उनको राजनीतिक भविश्यमा,
कुनैपनि असर नगर्ने खालको न्यायोचित निर्णय गर्न अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दवाब परेको छ। उहाँ भनेको संगठनमा दुख गरेको र पार्टीभित्र बलियो पकड राख्ने नेता हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई,
हामीले उनलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनिराखेका छौँ। स्रोतले भन्यो। महासचिवमा पुनसँगै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा,अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसालले आफ्नो दावी पेश गरिराखेका छन्।
माओवादी केन्द्रको विधान अनुसार,अध्यक्ष १,बरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित ७ उपाध्यक्ष,महासचिव १,उपमहासचिव २,सचिव ३,कोषाध्यक्ष १ सहित १५ जनको पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै पनि नेपाली समाज वर्गीय अन्तर्विरोधबाट अघि बढिरहेको बताएका छन्। पार्टीको आठौँ महाधिवेशन अन्तरगत सोमबारबाट सुरु भएको,
बन्द सत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिमा पराजित सामन्ती तत्त्वहरू दलाल नोकरशाही पुँजीपतिको पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक दलहरू संविधान खारेज गराउने षड्यन्त्रमा लागेको बताएका हुन्।
उनको यो भनाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षीत छ। ओलीले हुँदा खाँदाको संसद गैरकानुनी रुपमा विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको र त्यसको जगमा संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र गणतन्त्र समेत मास्ने षड्यन्त्र गरेको प्रचण्डको बुझाई छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारीहरुको षड्यन्त्र रोक्ने चार उपाय अपनाएका छन्। आठौं महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिगामी तत्वहरु विभिन्न रुपमा सल्बलाइरहेको भन्दै,
त्यसका लागि क्रान्तिकारी पार्टीको नाताले विभिन्न उपाय अपनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। यस्ता छन् प्रचण्डका चार उपाय: क) परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुको नाताले सवभन्दा पहिलो हामीले आफ्नै पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक,
सांगठनिक र सांस्कृतिक रुपले बलियो बनाउँदै जनमानससँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुको विकल्प छैन। प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी तत्वको प्रतिपादनका लागि सडक मोर्चाकै लागि तयारी अवस्थामा लाग्नुपर्दछ।
संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदम सडक संघर्षबाटै विफल भएको कुरा हामीले कहिल्यै भुल्न हुँदैन। सुदृढ पार्टी, व्यापक जनसंगठन, घनिष्ट जनसम्बन्ध र राष्ट्रहितका निमित्त कठोर संघर्षको तयारी नै हाम्रो विजयका आधार हुन्।
ख) बैदेशिक प्रतिक्रियावादी दलाल हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढाएर मात्र जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिका आधारहरु तयार हुन्छन्। आन्तरिक सुदृढिकरण, जनताका समस्या पहिचान गरेर मात्रै बाह्य हस्तक्षेप निस्तेज पार्न सकिन्छ।
ग) संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको मुद्दामा समान विचार राख्ने वामपन्थी, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरु र सम्पुर्ण देशभक्त जनशक्तिसँग सम्बन्ध कायम गरी प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी विरुद्धको संघर्षको तायरीलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्दछ।
घ) समाजवादको आधार तयार गर्न समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति जसमा सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सहकारी,नीजि क्षेत्रको समन्वयमा अगाडि बढ्न ठोस नीति र भूमिकाको जरुरी छ।